အရပ်အရှည်ဆုံး mascot နဲ့မှ လာတွေ့ရတဲ့ နာပိုလီရဲ့အပုဆုံး အင်ဆစ်ဂ်နီ
February 26, 2020 Zayar Phyo Han champion_league, Serie A 0
နာပိုလီနဲ့ဘာစီလိုနာတို့ရဲ့မနေ့ညချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်လေးမှာပါ။ နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေ ကွင်းထဲဝင်လာတော့ နာပိုလီတိုက်စစ်မှုးအင်ဆစ်ဂ်နီဟာ ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ အရပ်အရည်ဆုံး mascot နဲ့လာတွဲကျပါတယ်။ နာပိုလီရဲ့အရပ်အပုဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့အင်ဆစ်ဂ်နီအတွက် ဘယ်လောက်တောင် ကသိကအောက် ဖြစ်လိုက်လိမ့်မလဲ။
KKKKKKKK… O Insigne do tamanho do mascote da Champions está passando pela sua timeline!
Assista ao jogão, ao vivoeexclusivo, na TNT, no nosso Facebookeno @eiplus! #CasaDaChampions pic.twitter.com/9OHTYTWvOl
— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 25, 2020
အဲဒါဟာ ကွင်းထဲငြိမ်သက်မတ်တတ်ရပ်နေရတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်သီချင်းဖွင့်ချိန်မှာ ပိုပြီးသိသာသွားပါတယ်။ ကျန်တဲ့နာပိုလီအသင်းဖော်တွေက သက်ဆိုင်ရာ mascot တွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာသာ လက်တင်ထားရချိန် အင်ဆစ်ဂ်နီကတော့ သူ့ရဲ့အရပ်ရှည်တဲ့ mascot ကို လည်ပင်းဖက်နေရပါတယ်။ ဒါကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က ပရိသတ်တွေဟာ ဟာသလုပ်နေကြပါတယ်။
ပရိသတ်တစ်ယောက်ကဆိုရင် အင်ဆစ်ဂ်နီဟာ သူ့ mascot နဲ့ဆိုရင်တောင်မှ ခေါင်းတိုက်ဖို့ ရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်လို့ နောက်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း တမင်ရည်ရွယ်ပြီး အင်ဆစ်ဂ်နီကို အရပ်အရှည်ဆုံး mascot နဲ့ တွဲလိုက်တာလားလို့ ရယ်စရာအနေနဲ့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်း အင်ဆစ်ဂ်နီရဲ့အရပ်က ၅ ပေ ၃ လက်မသာရှိပြီး ဥရောပဘောလုံးသမားတွေထဲမှာတော့ အပုဆုံးစာရင်းဝင်ပါတယ်။ အဲဒီနာပိုလီအသင်းခေါင်းဆောင်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင်မက်ဆီထက်တောင် ပိုပုပါတယ်။
အရပ္အရွည္ဆုံး mascot နဲ႔မွ လာေတြ႕ရတဲ့ နာပိုလီရဲ႕အပုဆုံး အင္ဆစ္ဂ္နီ
နာပိုလီနဲ႔ဘာစီလိုနာတို႔ရဲ႕မေန႔ညခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္ေလးမွာပါ။ ႏွစ္ဖက္ကစားသမားေတြ ကြင္းထဲ၀င္လာေတာ့ နာပုိလီတိုက္စစ္မႈးအင္ဆစ္ဂ္နီဟာ ရယ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပဲ အရပ္အရည္ဆုံး mascot နဲ႔လာတြဲက်ပါတယ္။ နာပိုလီရဲ႕အရပ္အပုဆုံးကစားသမားျဖစ္တဲ့အင္ဆစ္ဂ္နီအတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္လိုက္လိမ့္မလဲ။
အဲဒါဟာ ကြင္းထဲၿငိမ္သက္မတ္တတ္ရပ္ေနရတဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္သီခ်င္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးသိသာသြားပါတယ္။ က်န္တဲ့နာပိုလီအသင္းေဖာ္ေတြက သက္ဆိုင္ရာ mascot ေတြရဲ႕ပခုံးေပၚမွာသာ လက္တင္ထားရခ်ိန္ အင္ဆစ္ဂ္နီကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အရပ္ရွည္တဲ့ mascot ကို လည္ပင္းဖက္ေနရပါတယ္။ ဒါကို ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚက ပရိသတ္ေတြဟာ ဟာသလုပ္ေနၾကပါတယ္။
ပရိသတ္တစ္ေယာက္ကဆုိရင္ အင္ဆစ္ဂ္နီဟာ သူ႔ mascot နဲ႔ဆိုရင္ေတာင္မွ ေခါင္းတိုက္ဖို႔ ရုန္းကန္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေနာက္ေျပာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကလည္း တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး အင္ဆစ္ဂ္နီကို အရပ္အရွည္ဆုံး mascot နဲ႔ တြဲလိုက္တာလားလို႔ ရယ္စရာအေနနဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လည္း အင္ဆစ္ဂ္နီရဲ႕အရပ္က ၅ ေပ ၃ လက္မသာရွိၿပီး ဥေရာပေဘာလုံးသမားေတြထဲမွာေတာ့ အပုဆုံးစာရင္း၀င္ပါတယ္။ အဲဒီနာပိုလီအသင္းေခါင္းေဆာင္ဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းေခါင္းေဆာင္မက္ဆီထက္ေတာင္ ပုိပုပါတယ္။
ချဲလ်ဆီးနိုင်ပွဲအပြီး လန်ဒန်ဟာ အနီရောင်ပါဆိုပြီး အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကို ဝမ်းမြောက်စေတဲ့ဂနာဘရီ
နာပိုလီဂိုးသမားအော့စ်ပီနာရဲ့ဘော်ဒီဖိန့်မှာ မျောသွားတဲ့ မက်ဆီ